6121 पटक पढिएको
अयोधीप्रसाद यादव, प्रमुख निर्वाचन अयुक्त राष्ट्रिय जनता पार्टीको बहिस्कार र विप्लव नेतृत्वको नेकपा माओवादीको अवरोध उत्पन्न गर्ने योजनाबीच पनि दुवै चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो त ?
निर्वाचन सफल बनाउन मुख्य योगदान ककसको रह्यो ? निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन जनताकै मुख्य योगदान छ । धान रोपाइँ थाँती राखेर छाता ओढेरै भए पनि उत्साहपूर्वक मतदानमा भाग लिनुलाई जनताको प्रजातन्त्रप्रतिको अटुट विश्वास मात्र नभई स्थानीय विकासको चाहना झल्काउँछ । निर्वाचनमा मतदान गर्न जनता तयार नभएका भए राज्यका सबै अंग लाग्दा पनि सम्पन्न गर्न असजिलो हुने थियो । सुरक्षा प्रबन्ध राम्रो भएकाले मतदाता, उम्मेदवार र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी ढुक्क भए । जसले निर्वाचन सफल बनाउन सहयोग गर्यो । राजनीतिक दल, सरकारी निकाय, सञ्चारमाध्यम, आयोगका कर्मचारीलगायत पदाधिकारीको योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
निर्वाचनमा जनता निकै उत्साही देखिए, यसले के संकेत गर्छ ? लामो समयको अन्तराल र संविधान जारी भएपछिको पहिलो भएकाले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनप्रति जनताको उत्साह बढेको हो । संविधानसभाका दुइटै निर्वाचनमा पनि जनताको यस्तो उत्साह र सहभागिता थिएन । स्थानीय तहको विकास, अधिकार र कर्तव्यसँग जोडिएकाले निर्वाचनको विशेष महत्व रह्यो । प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धतालाई जनताले मतपेटिकामार्फत अभिव्यक्त गर्नुले पनि गतिलो सन्देश दिएको छ ।
कतिपय दलले मतदातालाई मतदान गर्नबाट वञ्चित गराउने काम गरे, त्यस्ता दललाई कारबाही हुनुपर्ने होइन र ? निर्वाचन बहिस्कार गर्छु भन्नेलाई पनि कारबाही भएन, ऐन–नियम नभएर कि ? हामीसँग ऐन–नियम छन् । प्रजातन्त्रमा कसैले निर्वाचनमा भाग लिन्न भन्न पाउँछ । तर बहिष्कार दुई खालको हुन्छ– शान्तिपूर्ण र अर्काे उम्मेदवार हुनबाट रोक्ने । मतदान गर्न र प्रचार–प्रसारमा अवरोध गर्नेजस्ता क्रियाकलापलाई राज्यले नियन्त्रण गरेको छ । बहिस्कारको नाममा आपराधिक क्रियाकलाप भएमा उनीहरूलाई कारबाही हुन्छ । तर सरकारले कानुनको आधारमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ ।
मतगणनामा ढिलाइ हुँदा जनतामा नैराश्य पैदा भएको छ । अब हुने निर्वाचनमा मतगणनालाई छरितो बनाउन केही सोचिएको छ ? दोस्रो चरणको निर्वाचन परिणाम एक साताभित्रै आउने हाम्रो विश्वास छ । मतगणनाको लागि ठाउँ, जनशक्ति तथा स्रोतसाधनको पनि राम्रो व्यवस्था हुनुपर्छ । व्यवस्थापनको कमजोरीका कारण पहिलो चरणको निर्वाचनमा मतपरिणाम आउन ढिलाइ भएकै हो, यसपटक त्यो दोहोरिने छैन । मतगणना छिटो गर्ने वैकल्पिक व्यवस्था भनेको विद्युतीय मतदान हो । त्यसको लागि आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ । आर्थिक रूपमा बोझिलो भएर पनि यसलाई अपनाउन गाह्रो परेको हो । अब हुने संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतपत्रको व्यवस्थापन गर्ने कि विद्युतीय भोटिङ भन्नेबारेमा बहस भइरहेको छ । त्यसबारेका विभिन्न सम्भावनामा हामीले छलफल पनि गरिरहेका छौं ।
केही चुनौती देख्नुभएको छैन ? निर्वाचन गराउनु आफैंमा चुनौतीपूर्ण कार्य हो । अहिले तराईका जिल्लामा पनि मतदान प्रतिशत ८० सम्म छ । जनता मतदान गर्न आतुर छन् । सबै दलले निर्वाचनमा जान चाहिरहेका छन् । अहिले विरोध गरिरहेका दल पनि निर्वाचन प्रक्रियामा नआई हुँदैन । प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने र जनताको मत मान्ने हो भने निर्वाचनको विरोध गर्न मिल्दैन ।
आउने निर्वाचनमा बदर मत संख्या घटाउन आयोगले के गर्नुपर्ला ? जहाँ मतपत्र प्रयोग गरेर निर्वाचन गरिन्छ, त्यहाँ चार प्रतिशतसम्म मत बदर हुनुलाई सामान्य रूपमै लिइन्छ । मत बदर हुन नदिन विद्युतीय मतदानमा जानुको विकल्प छैन ।
भरतपुर महानगरपालिकाको मतपत्र च्यात्ने काम नजिर बन्यो, त्यस्तो कार्य आउने दिनमा हुन नदिन के गर्नुपर्ला ? हाम्रा संयन्त्र चुस्त÷दुरुस्त छन् । आउने दिनमा त्यस्ता घटना हुने छैनन् । अहिलेको मतगणनामा हाम्रा त्यस्ता संयन्त्रले काम गरिरहेका छन् । जनशक्ति र सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाइएको छ । हामीले पर्याप्त सावधानी अपनाएका छौं ।
प्रदेशसभा, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको गरी तीनवटा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आयोगको काँधमा छ, तयारी कस्तो छ ? समयका कारण यो काम जटिल छ । निर्वाचन जटिलपूर्ण काम नै हो । तर व्यवस्थापकीय पक्ष कति स्मार्ट छ, त्यसैले सफलता निर्धारण गर्छ । अहिलेसम्म क्षेत्र निर्धारण पनि भएको छैन । हामीले त्यसको तयारीको लागि आवश्यक ऐन, नियम, समय र स्रोत केकसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर आगामी निर्वाचन कार्यक्रम तर्जुमा समिति बनाएर काम गरेका छौं । हामीले तर्जुमा गरेर पठाएका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन कानुन संसद्मा छ।
२सञ्चारमाध्यमको भूमिका कस्तो पाउनुभयो ? पहिलो चरणको निर्वाचनमा भन्दा सञ्चारमाध्यमले राम्रो भूमिका खेले दोस्रोमा । मिडियाले आयोगको दाहिने हातको काम गरेकाले पनि निर्वाचन सफल भएको हो ।
आयोगले दलका उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा तोकेको थियो । पाँच हजारभन्दा बढी रकम चन्दाको रूपमा लिएमा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ, तर त्यो पालना भएन नि ? खर्चको अनुगमन नभएको पक्का हो । गाउँगाउँसम्म पुगेर निगरानी गर्न हामीसँग समय र जनशक्ति पनि भएन । हामीले निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि यसको अनुगमन गर्ने अधिकार दिएका थियौं । तर वडास्तरसम्म पुगेर त्यसको अनुगमन गर्न निकै गाह्रो रहेछ । त्यसको लागि जनचेतना आवश्यक पर्छ ।
आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई निर्वाचन ऐन २०७३ बमोजिम कारबाही गरियो त ? दल र उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको छ । प्रचारप्रसारको लागि दलहरूले छोटो अवधि पाएका थिए । उनीहरूका क्रियाकलापको निगरानी आयोगले गरेको थियो । कतिपयलाई सम्झाउने र कतिपयलाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भएको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउन आयोग क्रियाशील छ ।
निर्वाचनमा जनशक्ति र खर्च व्यवस्थापन कसरी गरियो ? हामीले सकेसम्म वैदेशिक सहयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै लगेका छौं । विगतका निर्वाचनमा भन्दा यसपटक न्यून मात्रै वैदेशिक सहयोग लिइएको छ । नेपाल सरकारले दिएको बजेटको आधारमा हामीले काम गरेका छौं । सरकारले दस अर्ब २८ करोड रुपैयाँ निर्वाचनको लागि बजेट दिएको थियो । दुई चरणको निर्वाचनमा छुट्ट्याइएकोमध्ये ५४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । यी दुवै निर्वाचनमा प्रति मतदाता ४८८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । अब हुने तीन तहको निर्वाचनको लागि भने खर्चको मोटामोटी हिसाबकिताब तयार पारी सरकारसँग रकम माग गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।
'नेपाली प्रेस आंशिक स्वतन्त्र' बुधवार, असार २१, २०७४